देवी वली, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य
सामान्य जीवन शैली, तार्किक कुरा र मिलनसार व्यवहार देवी वलीका विशेषता हुन । पश्चिम रुकुमकी नेकपाकी नेता वलीले जिल्ला देखि कर्णाली प्रदेशसभासम्म आफ्नो गहकिलो प्रस्तुतीबाटै आफूलाई चिनाएकी छिन् । उनलाई थप चिनाउन सेरोफेरोले बाल्यकाल देखिका संघर्ष र जीवनका भित्री पाटोहरुलाई केलाउने प्रयास गरेको छ ।
भैंसीसंग बित्यो बाल्यकाल
२०२८ असोज १४ गते बुबा धिर्जबहादुर वली र आमा उत्तिमकुमारी वलीको कोखबाट मेरो जन्म भएको हो । रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका (तत्कालिन जाङ गाविस ८ खारावाङ) मा जन्मिएकी हुँ ।
मेरो जन्मस्थल भौगोलिक रुपमा विकट हो । पुस माघमा हिउँ पथ्र्यो । कानेश्वर खेल खेल्न जाथ्यौं । घरबाट मकै लिएर जान्थ्यौ र भुटेर खान्थ्यौं । मेरो बुवा म छ महिनाको हुँदा बित्नु भएको हो । मलाई खासै बुवाको अनुहार ख्याल छैन । आमाले नै सुख दुःख गरेर पाल्नु भयो ।
बाल्यकाल बिताएको ठाउँ कसलाई रमाईलो नहोला ? त्यो उमेर पनि उस्तै । अहिले पनि रमाईलो नै लाग्छ । बाल्यकाल गाईभैंसी संग बितेको हो ।
रुकुमको पुर्वि क्षेत्र चुनवाङबाट हाम्रो बाजे खारावाङमा जानुभएको रै‘छ । गाईभैंसी पाल्ने जङ्गल जता छ त्यतै बस्ती बसाउने चलन हुन्थ्यो उ बेला । प्राय वलीहरुको बस्ती त्यस्तै जंगलको नजिकमा भेटिन्छ । तीन चार वर्षकी हुँदी हुँ, भैंसी गोठालो गएको, ठूली दिदी र भिनाजुहरुले बोकेर भैसीको गोठ सार्दै गरेको कुरा याद छ । त्यसपछीका धेरै कुरा थाहापाउँछु ।
घरदेखि टाढा हुन्थे गोठ । ९ वटा भैंसी थिए । चारवटा त कहिल्यै खाली भएनन् । धेरै भंैसी हुँदा बुकी चराउनको लागि डोल्पालीको बनमा लैजानुपथ्र्यौ ।
गोपारी स्कुल र लाकुरीको बोटमुनिको पढाई
गाउँमा स्कुल तीन कक्षासम्म थियो । ७/८ वर्षको हुँदा भर्ना भएको । कक्षा ३ सम्म पढें । मेरो बुवाहरु बेद पढ्ने भएकोले पढाइ प्रति सकारात्मक सोच थियो । छोराछोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्थ्यो । मेरी माइली दिदी फत्ते वली रुकुमकोट मामाको घर बसेर पढ्नुभयो । अरु दुइवटा दिदीहरुले पढ्नै मान्नुभएन ।
बुवा त म पढ्ने उमेरमा हुनुहन्नथ्यो तर आमाले मलाई पढ्न जानेहोस्की त्यहि धौले बल्ल (गोरु) को गोठालो गर्नेहोस् ? भन्नुहुन्थ्यो । बरु स्कुल जान्छु भनेर कक्षा तर तीन कक्षासम्म पढ्दा विद्यालयको भवन थिएन ।
सार्वजनिक चौरमा लागुरीको रुखमुनि बसेर पढ्थ्यौं । पानी पर्‍यो भने मेडमको घरमा जान्थ्यौ । केशरमान रोका (काँग्रेसबाट बिजयी पुर्व सांसद) की दिदी पुर्णा रोकाय उहाँ दाङमा हुनुहुन्छ । उहाँले नै हामीहरुलाई पढाउनु हुन्थ्यो । अहिले पनि सम्झनुहुन्छ । हामीले दिएको शिक्षा राम्रो रै‘छ भन्नुहुन्छ । नाताले उहाँ मेरो मितेरी नाताको भदैनी हो ।
कालोपाटि नै सबथोक हो त्यो बेला । कापी कलम हुँदैनथ्यो । खरीले कालोपाटीमा लेखेर पढेको हो । कोइला पिसेर कालोपाटिमा मोसो लगाउने अनी खरीले लेख्ने अनी मेट्ने गरिन्थ्यो । कक्षा ३ मा पढ्ने बेलामा किताब आएका थिए । त्यो बेलामा गोपारी स्कुल भन्थे अहिले हिमालय माध्यामिक विद्यालय खारावाङ भएको छ ।
कक्षा तीन पास भएपछि टाढा जानुपर्ने । कक्षा चारको किताब पनि पाइएन । माइली दिदि पढ्नको लागि काठमान्डौं आउनु भएको थियो । उहाँलाई खोज्न पठायौं तर किताब पाइएन । घरबाट तीनकक्षा सम्म मात्रै पढ्न सकिने थियो । कक्षा चारबाट चारगाउँ भन्ने ठाउँमा आएर डेरा गरेर बस्नु पर्ने कि त रुकुमकोट आउनु पर्ने भयो ।
रुकुमकोटमा मामाको घर । दाई र दिदिले पनि मामाको घरमै बसेर पढेका हुनाले त पनि त्यहाँ गए दाइलाई दुःख हुन्छ भनेर बरु चारगाऊँ जा भन्नु भयो । मलाई त्यो चारगाउँ गएर डेरा गरेर पढ्न मन लागेन । अनि पढ्न छोडें । तीन चार वर्ष पढाई छोड्दा पनि दिदिले पढ भन्नु भएको थियो तर ठुलो भएँ पढ्न लाज हुन्छ पढ्दिन भनेर तर्किएँ ।
तीन पटकमा एसएलसी कट्यो
२०४६ सालमा बहुदल आयो । गाउँ कमिटी बनाउने भनेर दिदीले २०४७ सालका अखिल नेपाल महिला संघकोे विधान पठाइदिनु भयोे । मैले अक्षर त पढें तर अर्थ बुझिन । अनि उमेर गएपनि पढ्न पर्ने रैछ भन्ने महशुस भयो । १७ वर्षकी थिएँ । गाउँको स्कुल त्यो बेलामा ५ कक्षासम्म भएको थियो । किताब ल्याउन पठाएर त्यहि फेरी स्कुल भर्ना भएँ । केहि सरहरुले सिकाई दिनुभयो । मैले पनि मेहनत गरें र ५ कक्षा पास भएँ ।
दिदीको बिवाह रुकुमकोटमै भएको थियो । मलाई पढ्ने जांगर आयो । त्यसपछी रुकुमकोट आएँ दिदीकोमा । त्यतिखेर दिदी भिनाजु रुक्मेली माविमा पढाउनुहुन्थ्यो । कक्षा ६ को परिक्षा नपढेरै सात कक्षामा भर्ना भएर पढें । मैले एसएलसी २१ वर्षमा दिएँ तर पास भइन । तीनपटक लगाएर एसएलसी पास गरेकी हुं । अरु विषयमा पास भएपनि म्याथमा लाग्थ्यो ।
घरकामा आमाको प्रशासन कडा । गाउँमा लाग्ने स्थानिय मेलाहरु प्नि टाढैबाट हेरेर फर्कनु पर्ने बाध्यता थियो । गन्ने मान्ने मान्छेहरुले एकल महिलाका छोराछोरी छाडा हुन्छन् भनेर आरोप लगाउँथे । त्यस्तो भन्दा आमाले आफ्नो इज्जत जान्छ भनेर हामीलाई कडाई गर्नुहुन्थ्यो ।
६० वर्षे बुवाले १२ वर्षकीलाई भगाउनु’भो
पारिवारीक अवस्था कमजोर थियो । पछि माइली दिदीले जागीर खाने भएपछि सहयोग गर्नुभयो । हाम्रो दुई वटी आमा हो । ठूली आमाको मृत्यु भएपछि मेरो आमालाई बुुवाले विवाह गर्नुभएकोे रे । १२ वर्षको उमेरमा मेरी आमालाई चोरेर लगेको हो रे रुकुमकोटबाट । आमाको पनि आमाबुवा सानैछंदा बित्नुभएको रै‘छ ।
हामी दुई आमाबाट १४ भाइबहिनी छौं । ठूलीआमा बाट ६ भाई छोरा र ३ बहिनी छोरी गरी ९ जना र मेरी आमाबाट चार बहिनी एउटा छोरा । म घरकी सबैभन्दा कान्छि छोरी हुँ । मेरो बुवा ६० वर्षको हुनुहुन्थ्यो रे आमालाई भगाउने बेलामा त्यो बेलामा मेरो आमा जम्मा १२ वर्षको ।
बाल्यकालमा म सोझी थिएँ रे । लाटी भनेर बोलाउँथे । तर घरमा बोलाउने नाम बाउनी थियो । बाहुनको जस्तो लामो नाक भएकोले मलाइ बाहुनी भनेको रे । सोझो भएपनि अलि अलि बिठ्याँई भने गरिन्थ्यो । कांक्रा चोर्ने, घरको नौनी, घिउ चोरेर जंगलमा लगेर रोटि पकाएर खाइन्थ्यो ।
एकदिन पानी परेको बेलामा घांस काट्न जान्छौं भनेर घरबाट गयौं । तर रोटी पकाएर खांदा रात पर्‍यो । त्यसपछि के घांस काट्नु यत्तिकै आइयो । खालि घर फर्केको देखेर आमाले बेसरी कुट्नु भयो ।
एकपटक त्यसरी राती खायौं त्यसरी । रातिमा आगो बलेको देखेमा धन बल्यो वा भूत रहेछ भन्ने चलन थियो । त्यो बेलामा पनि आमाहरु कराउंदै आउनु भयो जङ्गलतिर । आगो निभाएर भागियो । अहिले महशुस हुन्छ, किन कांक्रा चोरियो होला । अहिले त आफ्ना छोराछोरी पनि ठूला ठुला भए । तिनीहरुलाई नचोर नढांट भनेर सिकाईन्छ तर त्यो बेलामा आंफै त्यस्तो गरिन्थ्यो ।
गुन्यो चोली पाउँदाको हर्ष
बाल्यकालमा चार्डपर्व रमाईलो नै लाग्थ्यो । दशै आएपछि भात खान पाईन्थ्यो । नभए मकैको खाजा, ढिडो र रोटि खानुपथ्र्यो । दशैमा भने भात खान पाईन्थ्यो । मेरो सम्झन लाएक खुसी के छ भने त्यो बेलामा ९ वर्षको उमेरमा गुन्यो चोलो दिने चलन थियो छोरीलाई । बुटटे चोली र गुन्यो दिनुभयो आमाले त्यो बेलामा यती खुसी लाग्यो की खुसीको सिमै रहेन । अनी हाम्रो भाषामा पटुकी लाई धरो भन्छन् । कती पटक धरो फुकाउंदै बान्दै हेदै गरे ।
फुली मुन्द्री दिने बेलामा पनि धेरै खुशी लाग्यो । परिवारमा कमाईदिने कोहि पनि थिएन । आमाले भैंसी पालेर कती हुन्थ्यो र खान ठिकै । गहना बनाइदिनु भनेर धेरै भनेपछि आमाले एउटा भैंसी बेचेर फुली र मुन्द्री बनाइदिनु भयो । त्यो बेलामा चौध पन्ध्र वर्षकी थिए । खुब खुसी भएकी थिएँ ।
म राजनीतिमा जोडिएँ
एसएलसी नदिंदै ९ कक्षा पढ्दा नै अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा जोडिए । विद्यार्थी संगठन धेरै नजिकको लाग्थ्यो । तर जिल्ला कमिटीमा पनि साथीहरुले राखीदिए । अनी २०५० सालमा अनेमसंघको अध्यक्ष हुनैपर्छ भन्ने दबाब आयो ।
कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । त्यो बेलामा शिक्षकहरुलाई खुल्ला राजनीति गर्न प्रतिबन्ध थियो । मेरो दिदी फत्ते वली अनेमसंघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । खुल्ला राजनिती गर्न नपाएपछि उहाँले मलाई अध्यक्ष हुन भन्नु भयो । भिनाजु नन्दलाल शर्मा पछि एमालेको जिल्ला अध्यक्ष हो । भिनाजु विद्यालयको गुरु र घरको पनि अभिभावक हो ।
नौ कक्षा पढ्दा खेरी नै अनेमसंघको अध्यक्षमा राखिदिए । उता पार्टिले पनि पेल्यो र यता दिदीले अध्यक्ष छोड्दा कसलाई बनाउने भन्दा म नै हुनुपर्ने भयो । संगठन गराउन गाउँमा जानु पर्ने मलाई एकदम उल्टो लाग्ने । आफू विद्यार्थी भएकोले आमा, दिदिबहिनीहरुसंग जांदा असजिलो लाग्थ्यो ।
अनेमसंघको प्रथम सम्मेलनबाट अध्यक्ष भएँ । संस्थापक अध्यक्ष सरिता वली हुनुहुन्थ्यो । अर्घाखांचिको उहांको श्रीमान् त्यहां पढाएर बस्ने । उहांले नै प्रेरणा दिएपछि कमिटी बन्यो । त्यसपछि पत्ते वली दिदि आयोजक कमिटी अध्यक्ष हुनुभयो । म तीन कार्यकाल अध्यक्ष भएँ ।
२०५१ सालमा एसएलसी दिएँ । २०५४ सालमा मात्र पास भएँ । त्यसपछि क्याम्पस पढ्न मुसीकोट आइयो । भिरबारी क्याम्पस भन्थे हालको मुसिकोट बहुमुखि क्याम्पसबाट नेपाली विषयमा आइएड, बिएड गरें । एमएड भर्ना गरेर बिचमै छाडे । यता एलएलबी पनि सकेकी छु ।
(प्रस्तुति : सीता ओली)